Tora mukana wekusimudzirwa kwegore remahara reApple TV + nehunyengeri uhu IPhone nhau
Tora mukana wekusimudzira ikozvino kwegore remahara reApple TV + nehunyengeri uhu
Isu tese takafara mazuva mashoma apfuura apo Apple yakafunga kuwedzera kukwiridzira kwayo kwemahara kwegore kusvika Chikunguru. Isu tinoziva kuti iko kupihwa hakuwedzeri, uye kana iwe uri kutonakidzwa nazvo, haugone kuwedzera kana ukatenga chigadzirwa chitsva. Ndozvandakatenda kusvika svondo rapfuura.
Asi pane hunyengeri hwakatsanangurwa kwandiri ne shasha kubva ku "Machinist" Apple Chitoro svondo rapfuura. Ini ndatozviisa mukuita, uye ini ndave kutonakidzwa neApple TV + mahara kusvika Kukadzi 2022 ...
ZveZuva raValentine ndakapa mukadzi wangu ipad nyowani. Yake yatove nematambudziko ebhatiri, saka ndakamupa «Apple Kutengesa Mune»Uye ini ndakavandudza iyo yechina chizvarwa iPad Mhepo.
Ndakaenda kunotora kuApple Chitoro che «La Maquinista», muBarcelona, ​​uye mhando Genius aindipinda akatsanangura hunyengeri Kukodzera kukwidziridzwa kwegore remahara paApple TV +.
Nekunditambidza iyo iPad, akandiyeuchidza kuti ndaive nekodzero yeku gore remahara reApple TV +. Ndakamuudza kuti handikwanise kutora mukana uyu, nekuti iyo iPad yaive yemukadzi wangu, kuti tinozoibatanidza mumidziyo yedu "semhuri" uye tanga tichitonakidzwa newedzero yegore remahara kusvika Chikunguru.
Uye akabva andibvunza: Iwe unowanzo tarisa kupi Apple TV +? Uye ndakapindura kuti yaive paApple TV mukicheni, uye paTV iri mumba yekutandarira. Uye nezvose zvakasikwa zviri munyika akapindura: «Zvakanaka, gadzira ID nyowani yeApple neiyo itsva iPad. Activate iro remahara gore reApple TV +, gadzirisazve, mukadzi wako kuti agadzirisezve, uye shandisa iyo nyowani Apple ID yakagadzirwa mukicheni uye imba yekutandarira ».
Maziso angu akasvinudzwa, uye nenyemwerero huru ndakaonga iye Genius ane mutsa. Ini ndatova neApple TV + yemahara kusvika 14 de febrero del 2022 paApple TV mukicheni uye neiyo Samsung TV app mumba yekutandarira.
Kugadzira iyo Apple ID iri nyore kwazvo. Iwe unongoda email account.
Maitiro acho ari nyore. Kana iwe uchizoburitsa iyo iPad, iPhone, iPod touch, Apple TV kana Mac, Apple inokupa iwe gore-rimwe kunyoreswa kuApple TV +. Dambudziko nderekuti kana iwe watotenga imwe yemidziyo iyi uye uye uri kutonakidzwa nekusimudzirwa, haugone kuwedzera kune rimwezve gore nekutenga kutsva.
Saka mune yangu chaiyo kesi, ini ndakatanga iyo nyowani iPad kekutanga nekugadzira iyo nyowani Apple ID. Kana ndangogadzirirwa, ndakapinda Apple TV + nayo uye sarudzo yekumisikidza gore remahara rakabuda. Ini ndakadaro, ndokumirira iyo chisimbiso netsamba kubva kuApple.
Uye zvapera. Ndakadzorera iyo iPad uye ndakaipa mukadzi wangu kuitira kuti agone kuimisa nekupfuudza iyo data kubva kuPad ​​yakare. Ini ndaingofanirwa kudzoreredza Apple TV uye kuimisikidza neiyo itsva Apple ID, uye nekuchinja mashandiro eimba yekutandarira TV.
Kubva ikozvino zvichienda mberi, mumidziyo yandinayo "semhuri" kukwidziridzwa kunopera muna Chikunguru wegore rino, asi nekuda kwekunyepedzera uku mukicheni nemba yekutandarira ndinayo kusvika Kukadzi 2022. Ndatenda, Genius.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Tora mukana wekusimudzira ikozvino kwegore remahara reApple TV + nehunyengeri uhu
Uye kana iwe ukawedzera icho chitsva ID kumhuri, haungave uine gore remahara kune wese munhu?
Zvakanaka, huipi hwakashata, gadzira appleid nyowani woigadzirisa pakombuta-itsva.
IPadOS 14.5 beta inosvitsa Spanish kune iyo 'Scribble' nzira yekunyora
Apple inotsvaga yakakosha LiDAR scanner yemota yayo yakazvimiririra